Roulette no manomboka milalao miaraka amin'ny 35:1 PayOut amin'ny Mobilary Casino, PC, ary Tablet Ento ny $ € £ 500 Tonga soa petra-bola Match Package!
(New mpilalao ihany. 30Wagering X takiana mampihatra. £ 10 Min. petra-bola. Slot lalao ihany. T&C ny Ampiharo)
Tsy misy lehibe noho ny fientanentanana nihodidina ny Roulette kodiarana ny harena sy handao ny zava-drehetra ho vintana rehefa milalao CoinFalls.com mampino indrindra mandrakizay vola lalao. Tena roulette dia fahazoan-dalana avy amin'ny UK Commission Filokana sy ny misy ny hilalao izao finday, takelaka sy ny biraonao amin'ny natoky indrindra indrindra UK itokisana Casino. Eny, CoinFalls.com Casino manana ny tsara indrindra ho anao ny tontolo iainana tia finday roulette amin'ny tena mifanohitra, 24/7 toeram-piantsoana, haingana indrindra ny trano filokana rehetra mba handoavana avy, ary ny faran'izay hatramin'ny $ £ € 500 mandray tombony petra-bola lalao toerana lehibe amin'ny toerana! Coinfalls.com mitondra anao ny fahafahana hilalao ny Notsapaina sy nosedraina lalao ny vintana avy na aiza na aiza eo amin'ny efa ho misy fitaovana. Azonao atao ny milalao Casino slots amin'ny £ $ € 5 maimaim-poana ao amin'ny petra-bola CoinFalls tsy maintsy. Raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana afaka wagering dia mampiasa winnings hilalao roulette. Read our coinfalls.com/boku-casino-gaming-deposits/ for info on mobile deposits!
Azonao atao ihany koa ny mankafy ny tsara indrindra Live Roulette traikefa amin'ny Coinfalls.com
Mandehana Down ny Roulette Timeline ho Online Days!
Ny tantaran'ny Roulette dia manondro ny loharanom-baovao maro ny sarina ny fiandohan'ny tsy pinpointing daty manokana. Ny andinin-tsoratra masina malaza indrindra azo natao tamin'ny taonjato faha-17, rehefa niezaka Blaise Pascal hanorina mandrakizay sarimihetsika milina, nandeha hamely an'i ny lalàn'ny fizika. Ny roulette kodia dia mino ho fitambaran'ny anglisy kodiarana lalao Roly-Poly, Reiner, Ace ny Fo, ary E.O., Italiana birao lalao ny Hoca sy Biribi, ary “Roulette” avy amin'ny efa misy frantsay birao lalao izany anarana.
Na inona na inona ny antony dia ny fiaviany, lalao ny vintana, izay manolotra pickings manan-karena dia ho lehibe ao amin'ny lazan'ny nandritra izay taonjato vitsivitsy. Fiaviana toy izany nahatonga ireo manam-pahaizana manokana lalao izay afaka mba fenoy ny fonao sy ny sainao ny haingana indrindra. Roa malaza fiovana izay hahaliana ny maro no Eoropeana sy Amerikana Roulette Roulette izay niroborobo manerana izao tontolo izao.
Mobile Roulette & More Amin'ny Andro Ankehitriny
Ny ankehitriny miovaova toy roulette no tena amantarana ny isan'ny slots hita ao amin'ny ny Roulette Wheel. Ny Eoropeana Roulette manana 37 slots, i.e. isa 0, 1 ny 36. Ny American Roulette manana 38 slots, i.e. ny isa, 0, 00, ary 1 ny 36.
Ny anatrehan'ny fanampiny 00 dia mampitombo ny trano isa sisin'ny ho an'ny American Roulette ho 5.26%. While the European Roulette has a house edge of 2.7%. Mety ho io amoron'ny kely, fa zava-dehibe be dia be, rehefa manao ny Roulette lalao.
Ny fisehon'ny latabatra samy hafa ihany koa ny fiovana eo amin'ny roa. Na dia ny fototra lalao-tsehatra miova, fa hendry ny mahafantatra ny kolaka fahasamihafana alohan'ny milalao amin'ny tena vola.
CoinFalls Casino manafaka ny faran'izay roulette tambin anao rehefa te-hilalao ny faran'izay lalao ny vintana amin'ny PC, Tablet na ny fitaovana sarobidy finday. Mba manararaotra ny tena manokana ny tolotra, fotsiny ianao miditra ao amin'ny finday manokana isany sy mamorona ny finday manokana Casino kaonty lalao ho toy ny mpilalao vaovao.
Teo an mahomby fidirana, ny Casino nahazoan-dalana avy hatrany ny kaonty ny £ 5 fiderana tombony azo, ihany no tokony nilalao tamin'ny slot milina. Ihany no tena vola hilokana no namela amin'ny Roulette, Fa misy vaovao tsara rehefa mahazo ny 200% petra-bola tombony eo amin'ny petra-bola voalohany manome anao avo roa heny ny vola napetrakao hilalao Mobile roulette. Raha mahazo tsara vintana, ny winnings niala azo raha tsy aorian'ny fihaonana ny fitsipika takin'ny wagering toy ny isan-politika tombony ara-drariny.
Betting amin'ny Roulette
Ny karazana filokana izay azo atao amin'ny roulette lalao miankina amin'ny hilokana lamina sy maniry ny handresy. Rehefa milalao roulette dia lalao ny vintana, tompon'andraikitra filokana dia tsy maintsy. Mety mametraka na filokana anatiny sy ivelany filokana. Ihany ny Malagasy Roulette manana ny dimy-Number Bet.
Inside filokana: Bet eo amin'ny iray na maro amin'ireo enina azo atao Grouping ho ambany
Straight Bet – 35:1 payout (Miloka amin'ny isa iray)
Split Bet- 17:1 payout (Bet amin'ny mifanila isa,)
Street Bet – 11:1 payout (Bet amin'ny 3 isa in misesy)
Corner Bet – 8:1 payout (Miloka amin'ny andian-tsoratra ny 4 isa)
Dimy Number Bet -6:1 payout (Bet amin'ny 5 isa (0, 00, 1, 2, 3)
Six-dalana, Bet – 5:1 payout (Bet amin'ny 6 isa amin'ny 2 mifanila andalana)
Outside filokana: Miloka eo akory va ny kilalao miendrika biriky ivelan'ny latabatra Grid.
Tsanganana Bet -2:1 payout (Bet amin'ny 1 ny 3 andry,)
Ampolony Bet - 2:1 payout (Bet amin'ny 12 isa andian-tsoratra)
Na dia Money Bet -1:1 payout (Bet amin'ny 18 isa (na dia, hafahafa, mainty na mena)
Fahazoan-dalana milalao sy voafehy ireo Roulette dia mora sy tsotra, misy avy hatrany ary izany Casino table lalao tia fiderana sy ny fitiavana avy amin'ny mpankafy an-tapitrisany manerana izao tontolo izao. Aza adino fa mirehareha koa CoinFalls a superb range of mobile slots sy ny Casino lalao mba hiaro anao voly. Ny manampy mpanjifa ekipa miandry ny hamaly izay fanontaniana mety ho. Ny velona roulette mpivarotra no nitsangana teo amin'ny latabatra fotoana izao miandry anao hametraka ny poti teo amin'ny vato fisaka. It’s easy to deposit by credit card and make your play right now.
UK Managed Roulette Player Customer Services Support midera ny Andro Fifadiana Payouts sy Easy Cash-In & Cash-Out Options at CoinFalls.com